म्युजिक भिडियोमा साम्राज्ञीको पारिश्रमिक कति ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized म्युजिक भिडियोमा साम्राज्ञीको पारिश्रमिक कति ?
पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ। नयाँ चलचित्र छायांकनको त परको कुरा निर्माण भैसकेका चलचित्र पनि रिलिज हुन् सकेका छैनन। तर महामारी कै बीच थुप्रै म्युजिक भिडियो भने निर्माण भैरहेका छन्।
चलचित्रमा छायांकन नभएपछि धेरै जसो नायक नायिका म्युजिक भिडियो तिर लागे। सस्तो पारिश्रमिकमा पनि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरे। तर केहि नायक नायिकाहरुले भने म्युजिक भिडियोमा काम नगर्ने बताए। यस्तै म्युजिक भिडियोमा काम नगर्ने बताउदै आएकी नेपाली चलचित्रकी हट केक नायिका हुन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी भर्खरै एउटा म्युजिक भिडियोमा भने काम गरिन।
निषेधाज्ञापछि ट्रि इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गरेको एक भिडियोमा उनले काम गरेकी हुन। उनले अभिनय गरेको भिडियो असोज २० गते काठमाडौंमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । भिडियोेलाई माइकल चन्दले निर्देशन गरेका हुन् ।
पारिश्रमिक चित्तवुझ्दो र गीत राम्रो आएको खण्डमा मात्र काम गर्ने सोचमा साम्राज्ञी रहेकी छिन् । चलचित्रमा समेत निक्कै माग भएकी साम्राज्ञीको माग भिडियोमा पनि बढेको छ । तर, साम्राज्ञीलाई यति महंगो पारिश्रमिक दिएर काम गराउन कति निर्माता तयार होलान् त् ?
Previous articleअहिलेसम्म दशैँका लागी नयाँ नोट साट्नु भएको छैन? छैन भने यसरि साट्नुहोस।
Next article‘रत्नपार्क’मा काम गर्दै भिटेन
अमेजनले २२ करोडमा किन्यो ‘पुष्पा’